Inona no mahatonga ny fitaovana maoderina tsara indrindra Amazon amin'ny fanatontosana tena tsara?
Fantatry ny olona rehetra fantatry ny Search Engine Optimization fa tsy ho vita mihitsy ny ho lasa mpivarotra an-tserasera mahomby amin'ny Amazon raha tsy mampiasa sokajy maotera izay mahatonga ireo zavatra mora kokoa. Iza no tena manan-danja handray ny safidy tsara? Fa noho ny tsy maintsy hitazomana tsy tapaka ny fanamafisana ny teny fototra fototra tianao, hikaroka tsimok'aretina fitadiavana vaovao, ary mitady voka-tsoa mety ahazoana vokatra izay tsy nampidirinao tao amin'ny lisitra misy anao.
Nalaina tamin'ny ankapobeny, ny tanjona tanjon'ny azo antoka mety ho fitaovana azo antoka amin'ny teny malaza Amazon dia ny mamantatra ny tsy fifaninanana ho an'ny teny fanalahidy manan-danja indrindra, ao anatin'ny fikasana hividianana hividianana fivoarana bebe kokoa mba hanampy amin'ny fivelaranao kokoa ny mpanjifa mety ho ny tena mpivarotra. Fa ahoana kosa ny fisafidianana ny safidy mety izay mety amin'ny filànao sy ny tanjon'ny orinasa? Eny, miankina izany.
Ny zavatra iray dia ny mpanampy an-tserasera tena tsara dia natao hanampy anao hahita ny teny fanalahidy marina sy ireo andian-tsoratra lava fohy izay hanangana ny tanjon'ny mpampiasa indrindra. Amin'izany fomba izany, dia andrasana handefasana volavolam-pikarohana ambony kokoa ianao. Farany, mba hahatonga ny isa maromaro amin'ny fanatanterahana ny fivarotana am-pahombiazana eo amin'ny tsenan'i Amazon, amin'ny manaraka hanome ny hazavana maitso ho an'ny fandrosoana laharana ambony kokoa. Amin'ny ankapobeny, ny vahaolana rehetra momba ny fikarohana momba ny fikarohana - na ny fitaovana fikarohana fototra tokana, sehatra an-tserasera iray miaraka amin'ny fitaovana universalité, software manara-penitra / automation, na fanolorana "turn-key" - dia natao hanome anao ireto tolotra sy tombontsoa manaraka ireto:
Ny teny fanalahidy avo indrindra amin'ny teny.
Fomba fitadiavam-potoana fohy.
Taratasy ankapobeny an'ny CPC.
Tombanana ho an'ny fifaninanana ho an'ny sokajy tsara indrindra.
Fahatakaran-tsaina sy laharam-pahamehana.
Ity fitaovana maoderina mitahiry am-panaon'i Amazon io dia afaka manampy anao hamolavola ny isa voambolana tsy maintsy mandresy, ary ny vokatra lava Ny fikarohana fikarohana momba ny vokatra voatanisa mba hijanonana hatrany ny toetr'andro, ary manana safidy tsaratsara kokoa ny mampiseho akaiky kokoa ny fikarohana amin'ny fikarohana. Ny SkyRocket dia afaka manampy anao mora mamorona adiresy maimaimpoana manan-danja indrindra miisa 200 mifanaraka amin'ny ASIN manokana, manome torohevitra azo tsapain-tànana momba ireo teny fototra tena tianao hijerena ireo vokatrao amin'ny fivarotana, ary manampy anao amin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana ho an'ireo singa fototra ilaina ho anao Lisitry ny varotra varotra.
Safidy iray hafa mety hahatongavanao ho fitaovana Keyword Amazon Keyword, afaka mahavita manomboka ireo teny fanalahidy soso-kevitra sy ny sisa rehetra mifandraika amin'ny fikarohana mifandraika amin'ny vokatra / sokajinao. Miaraka amin'ny tahiry goavam-be misy azy manodidina ny 40 tapitrisa fikarohana ampiasain'ireo mpividy mivantana amin'ny Amazon, dia fantatry ny Keyword Inspector daholo ny momba ny teny fanalahidy ambony indrindra ny mpanohitra anao akaiky indrindra. Ary ianao tsy hanakorontana amin'ny vola be loatra na ny antontam-baovao mavesatra - na ny lisitry ny tenimiafin'ny mpifaninana misy anao miaraka amin'ny teny an'arivony dia mety ho lasa tahadika finday ahitana sokajy tsara sy sokajy tsara. Ary aza adino fa mety hampiasa io fitaovana goavana io ianao mba hitondra ny fampielezan-kevitra PPC ary hampivoatra ny valin'ny dokam-barotra amin'ny diplaoma ambony Source .